Claudio Ranieri oo markale shaaciyay in Mahrez uusan meelna uga socon Leicester City – Gool FM
Claudio Ranieri oo markale shaaciyay in Mahrez uusan meelna uga socon Leicester City
Liibaan Fantastic August 10, 2016
(Leicester) 10 Agoosto 2016 Tababaraha kooxda Leicester City Claudio Ranieri ayaa markale ku celiyay in laacibkiisa Riyad Mahrez uusan meelna uga socon kooxdiisa.
Arsenal ayaa si wayn u doonaysa 25 jirka reer Algeria ee Riyad Mahrez suuqa kala iibsiga ee xaggaagan, balse Claudio Ranieri ayaa sheegay in qandaraaska Mahrez uusan ku jirin qodob qoraya in laburburin karo.
Tababare Claudio Ranieri oo la hadlay Sky Sports ayaa yiri:
“Mahrez? haa anaga ayuu nala sii joogi doonaa, waxaan doonaynaa inaan ilaashano ciyaartoydeena, Chelsea waxay bixisay lacagta lagu burburin karay heshiiska Kante laakiin Mahrez malahan heshiis burburin”.
“Inkabadan hal jeer ayaan lahadlay, wuxuuna ii sheegay inuu nala siijoogi doono, waa nin aqli badan, wuxuuna garanayaa habkii uu umaarayn lahaa mustaqbalkiisa”.
"Waan go'aamiyay goolhayaha ciyaari doona Super Cup-ka" - Luis Enrique
Inter Milan oo bartilmaameed sanaysa saxiixa Lorenzo Insigne